21 Mitemo Yekubudirira Kwemagariro Masisitimu | Martech Zone
Chipiri, Mbudzi 19, 2013 Chipiri, Mbudzi 19, 2013 Douglas Karr
Handidi izwi rekuti "mitemo" kana zvasvika paSocial Media Kushambadzira, asi ndinotenda isu tine ruzivo rwakakwana uye zvidzidzo zvezviitiko kuti tinzwisise kuti makambani akanyatsoita basa rakakura sei achishandisa vezvenhau uye akanyatso kuridza. Iyi infographic inoita basa rakanakisa mukumisikidza zvimwe zvinotarisirwa uye nhungamiro kana zvasvika pakuvandudza yako yemagariro media zano.
Kufanana nezvimwe zvese, pane isina kunyorwa mitemo inosanganisirwa musocial media kushambadzira. Wese munhu anosungirwa kutevedzera mitemo iyi, asi izvo zvitsva kumutambo zvinogona kurasikirwa nezvakakosha. Heano makumi maviri nemaviri mitemo isina kunyorwa yemasocial media kushambadzira iyo yakagadzirirwa kugadzira hwaro hwakasimba hwechero pasocial media kushambadzira.
Iyo infographic yakagadzirwa ne Zvemagariro Metrics Pro, WordPress plugin inoteedzera maTweets, kuda, mapini, + 1s uye zvimwe kurudyi kubva kuWordPress Dashibhodhi yako!
Tags: infographicmitemo yemagariro enhaupasocial media infographicmagariro enhau anotonga
pasocial media kushambadzira rochest
Chaizvoizvo yakanaka posvo …… .tenda neruzivo runobatsira.
Nzvimbo dzeZVA SEO
Chaizvoizvo chikuru posvo yekuziva nezve "Infographic: 21 Mitemo Yekubudirira Yemagariro Maseru Maitiro", ndatenda neruzivo ..
Hotera Internet Kushambadzira
Eya, multimedia inoshanda chaizvo yakanaka nekuti vanhu vese vari munyika vanoona nyika ichikanda imwe firosofi chaiyo uye yakagovaniswa rondedzero ..
Yakanaka blog, yakatumirwa mune yakasarudzika nzira yekunzwisisa.
Excelent post, ndinogona here kushandura yako infographic uye kuiburitsa?
Ndiri mudunhu rine vatauri veSpanish saka zvingave zvakanaka kuve nazvo pamutauro wedu wekuzvarwa.
Eheka! Ingova nechokwadi chekupa mbiri kune iye wekutanga muparidzi pane ini.